एनआरएन भिजन के हो ? – NepalayaNews.com
एनआरएन भिजन के हो ?
२४ चैत्र २०७१, मंगलवार ०१:४३
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) संघ अमेरिका नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संघारमा छ । अमेरिमा पनि यो संस्था पुरानै हो तर, पनि यसपालिको महाधिवेशको भन्दा विशेष महत्व छ । त्यो किनभने यसपालि जति सदस्य यो संस्थामा यसअघि कहिल्यै थिएनन् । यसपालि जति आकर्षण यो संस्थामा यसअघि कहिल्यै भएन । यसपालि जति धेरैको चासो यो संस्थामा यसअघि कहिल्यै परेन । झन्डै १२ हजार नेपाली सदस्य बनेको अमेरिकी च्याप्टर एनआरएनका शाखाहरु भएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो देश बन्न पुगेको छ । यतिका सदस्य अरु कुनै देशमा बनेका छैनन् । अहिलेसम्म एनआरएनमा अमेरिकी भूमिका शून्यशून्यजस्तो देखिएको थियो । अब भने अमेरिकाका नेपाली ब्युँझेजस्तो भएको छ ।
छ न त अमेरिमा नेपालीका संस्था नभएका होइनन् । तर, धेरै पछि भए पनि एनआरएन कै किन तङ्ग्रिएर आयो त ? यसको सपाट जवाफ छ—विदेशमा बस्ने नेपालीको नेपालमा प्रतिनिधिमूलक आवाज उठाउन सक्ने साझा संस्था एनआरएनबाहेक अरु कुनै हुनै सक्दैन । अरु संस्था कि राजनीतिक विचारका आधारमा बनेका छन्, कि जात, क्षेत्र वा भूगोलका आधारमा । तर एनआरएनमात्रै यस्तो संस्था हो जुन, ती सबैभन्दा माथि उठेको छ । राजनीति गर्न खोज्ने त जहाँ पनि हुन्छन्, तर यसमा त्यस्तो धृष्टताका आधारमा अहिलेसम्म नेतृत्व चयन भएको छैन्, अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा अर्थात मूल समितिमा । अझैं भनौं केन्द्रीय समितिमा । अमेरिकामा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । अरु कुनै रङ भित्रन दिनु हुँदैन । विशुद्ध नेपाली भएर संस्था हाँकिनुपर्छ ।
एनआरएन भन्ने संस्था साझा त भयो तर, यसले के गर्ने भन्ने अझैं अन्योल छ । एनआरएन के का लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर यसैमा आबद्ध पदाधिकारीले पनि चित्तबुझ्ने गरी दिन सकेको पाइँदैन । नेपालमा दोहोरो नागरिकता दिने प्रावधान बनाउने यसको तत्कालको कार्यनीति हो कि जस्तो लाग्छ तर, त्यो एजेन्डामा पनि मलिन छ अचेल । यसै पनि नेपाल सरकारले वितरण गरेको एनआरएन परिचय पत्र र त्यो परिचयपत्र लिँदा दिइने सुविधाबाट पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु खासै आकर्षित नभएको देखिन्छ । आखिर त्यो परिचयपत्र पनि त नागरिकता जत्तिकै जत्तिकै थियो । त्यही आधारमा नेपाली पहिचान रहिरहन्थ्यो र दोहोरो नागरिकता लिने सुविधाको भरयाङ टेक्न सक्थ्यो । अन्तमा एनआरएन अमेरिकाको अधिवेशनले यो संस्थाको दीर्घकालीन रणनीति तय गरोस्, त्यसैअनुसारका कार्यक्रम ल्याओस्, अर्थात सबैभन्दा पहिला भिजन क्लियर होस् । होइन भने कोही कसैलाई नेता बनेर नेपालमा राजनीतिक पहँुच बनाउने भरयाङमात्रै एनआरएन बन्नु हुँदैन । हो, त्यसैले सबैभन्दा पनि पहिला भिजन बनोस् । नयाँ बन्ने नेतृत्वको अर्जुनदृष्टि त्यसैमा परोस् ।
ट्रम्प दम्पतीले कोरोनाको खोप जनवरीमै लगाएका थिएः पूर्व सल्लाहकार २४ चैत्र २०७१, मंगलवार ०१:४३
महाभियोगबाट मुक्तिपछि ट्रम्पको पहिलो भाषण, बाइडेनले ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई ‘अमेरिका लास्ट’ बनाएको आरोप २४ चैत्र २०७१, मंगलवार ०१:४३
अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको ४० लाख डोज खोप मङ्गलबारसम्ममा वितरण गर्ने २४ चैत्र २०७१, मंगलवार ०१:४३